Ukhenketho lwefektri -Ikhawulezi yokuNikwa kweNqwelo (ubuNjineli) Co., Ltd.
Ngokukhawuleza banikwe izixhobo oluzenzekelayo phambili, nto leyo enika banikwe imveliso esingabizi ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo kunye namava eminyaka.
Ukukhawulezisa ngokukhawuleza kunokunika imveliso egcizelelekileyo ngokusekwe kumava eminyaka kunye nohlobo lwe-ERP oluzenzekelayo kunye nolawulo lwedijithali.
Banikwe ngokukhawuleza kudlule isiQinisekiso seMveliso yoKhuseleko, kwaye ayisebenzi ISO9001: Inkqubo esemgangathweni ka-2008, ISO14001 inkqubo yolawulo lokusingqongileyo kwaye Inkqubo ye-OHSAS18001 yolawulo lokhuseleko lwezempilo. Inobuchule bokuvelisa phambili kunye nezixhobo zenkqubo yemveliso epheleleyo. Umatshini wokuwelda ngokupheleleyo kunye nengalo yeerobhothi engenisiweyo yokwandisa imveliso kunye nenkqubo yokwenza, imveliso ephuculweyo ephezulu kunye nomgangatho wemveliso.
Ukuchana ngokukhawuleza kwakhiwe ubuhlakani bobuchule kunye neYunivesithi yaseMpuma Mzantsi kunye nokusayina isivumelwano sexesha elide sentsebenziswano; mveliso basebenzisana Shanghai Jiao Tong University, ukuqonda imveliso oluzenzekelayo kunye nobuchwepheshe kakhulu.
Ukukhawuleza kwabasebenzi kungabonelela ngeendlela ekujoliswe kuzo ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zamashishini ahlukeneyo.
Iimveliso zokuKhawulezisa ukuKhawuleza ezivunyiweyo yi-EN 12811-1: 2003 umgangatho, kunye Isiqinisekiso se-CE, i-SGS, i-ANSI10.8, AS / NZS 1576.3, sililungu leSAIA. Ngokukhawuleza banikwe ukwenza iintlobo ezahlukeneyo formwork kunye banikwe isampulu processing, uyilo kunye nemveliso ehlabathini lonke.
Ukukhawuleza kwabasebenzi kungumnini wemveliso ezizimeleyo, ekhokelela kwimveliso yemveliso ezenzekelayo kunye nomthamo wemveliso ephezulu enokuhlangabezana nenani leeprojekthi ezakhiweyo ibango.